Paunak 3:1-5 - Tedim Laisiangtho	Select Bible
King James Version proverbs 3:1-5
မြန်မာကျမ်းစာ proverbs 3:1-5
ငါ့သား၊ ငါပေးသောတရားကို မမေ့နှင့်။ ငါ့ပညတ်တို့ကို သင်၏နှလုံးစောင့်ရှောက်ပါစေ။
အကြောင်းမူကား၊ ပညတ်တရားသည် အသက်တာရှည်သော ကာလနှစ်ပေါင်းများကို၎င်း၊ ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကို ၎င်း တိုးပွါးစေလိမ့်မည်။
ကရုဏာတရားနှင့် သစ္စာတရားကို သင်နှင့် မကွာစေနှင့်။ ထိုတရားတို့ကို သင်၏လည်ပင်း၌ဆွဲထား လော့။ နှလုံးအင်းစာရင်း၌ ရေးသွင်းလော့။
ထိုသို့ပြုလျှင် ဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာရ၍၊ ကျေးဇူးကို ခံရလိမ့်မည်။
ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုးစားလော့။ ကိုယ်ဥာဏ်ကို အမှီမပြုနှင့်။
Det Norsk Bibelselskap proverbs 3:1-5
Young's Literal Translation proverbs 3:1-5
My son! my law forget not, And my commands let thy heart keep, 2
For length of days and years, Life and peace they do add to thee. 3
Let not kindness and truth forsake thee, Bind them on thy neck, Write them on the tablet of thy heart, 4
And find grace and good understanding In the eyes of God and man. 5
Trust unto Jehovah with all thy heart, And unto thine own understanding lean not. Tedim Laisiangtho proverbs 3:1-5
Ka ta aw, kong thuhilhte mangngilh kei in la, kong thugente phawk tawntung in. 2
Kong thuhilhte in na khan' hong sausak ding a, hong daupaisak ding hi.
Thumanna leh cihtakna khahsuah ngei kei in la, na ngawngah tuate okin, na lungtang tungah gelh in.
Tua hi leh, Pasian' mai leh mite' mai-ah maipha ngahin na ma vang ding hi. 5
Na lungsim khempeuh tawh Topa muang in la, nang' theihna suang kei in.